Impilo yabantu ingaphezu kwelungelo lobunikazi bemigomo yokhuvethe - Bayede News
Impi yokhuvethe: UMengameli uluthathela phezulu olokhuvethe
I-European Commission isinxenxe i-United States nabanye abakhiqizi bomuthi wokugoma abaphambili ukuthi bathumele yonke imithi abayikhiqizayo njengoba kwenza yi-European Union (EU), kunokuba bakhulume ngamalungelo obunikazi.
Inhloko yeKhomishini u-Ursula Von Der Leyen (osesithombeni)itshele isithangami sabezindaba kungqungquthela yabaholi be-EU ukuthi izingxoxo mayelana namalungelo obunikazi bokusungula ngeke kukhiqizeke ngisho owodwa umthamo womuthi wokugomela ukhuvethe esikhathini esifushane kuya kwesizayo.
“Kufanele sivulekele ukuhola le ngxoxo. Kepha uma siyihola kumele kube nokubukisisa ngoba sidinga imijovo yokugomela ukhuvethe umhlaba wonke manje.”
“I-European Union yisona kuphela isifunda sezwekazi noma esentando yeningi salo mhlaba esithumela emazweni amaningi,” kusho uVon Der Leyen.
Uthe cishe amaphesenti angama-50 womuthi wokugomela ukhuvethe okhiqizwe e-Europe uthunyelwa emazweni acishe abe ngama-90, kubandakanya nalawo asohlelweni olusekelwa yiWorld Health Organisation (WHO) iCOVAX.
“Futhi simema bonke labo ababamba iqhaza enkulumompikiswanweni yobunikazi bobukhiqiza ukuthi bahlanganyele nathi ukuzibophezela ekuzimiseleni ukuthumela ingxenye enkulu yalokho okukhiqizwayo kuleso sifunda,” kusho lesi sikhulu.
Ukukhiqizwa okuphezulu kuphela, okususa izithiyo zokuthunyelwa kwamanye amazwe nokwabelana ngemithi yokugoma esivele isicelwe ngamazwe kungasiza ngokushesha ukulwa nalolu bhubhane ngokushesha.
“Ngakho-ke yini edingekayo esikhathini esifushane nesikhathi esizayo: Okokuqala nje ukwabelana ngomuthi wokugoma. Okwesibili ukwabelana ngemithi yokugoma ekhiqizwayo. Okwesithathu wukutshala imali ekwandiseni umthamo wokwenza imishanguzo yokugoma.”
UVon Der Leyen uthe i-EU isiqale indlela yayo yokwabelana ngemithi yokugoma, yenza isibonelo ngokuletha imithamo engama-615 000 emazweni aseWestern Balkan.